यर्मिया 8 ERV-NE - यो सन्देश - Bible Gateway
8 यो सन्देश परमेश्वरबाट आएको हो, “त्यस बेला मानिसहरूले यहूदाका राजाहरू र मुख्य शासकहरूको हड्डीहरू, अगमवक्ताहरू र पूजाहारीहरूका हड्डीहरू र यरूशलेमका समस्त मानिसहरूका हड्डीहरू उनीहरूका चिहानहरूबाट लैजानेछन्।2तिनीहरूले सबै हड्डीहरू घाम, जुन र ताराहरू मुनि मैदानमा फिँजाउनेछन्। यरूशलेमका मानिसहरूले घाम, जुन अनि ताराहरूलाई माया गर्थे। तिनीहरूले तिनीहरूलाई सेवा र अनुशरण गरे। तिनीहरूले तिनीहरूसित परमर्श गरे अनि तिनीहरूको अघि घुँडा टेकेर पूजा गरे। फेरि कसैले पनि हड्डीहरू बटुल्ने छैन अनि पुर्ने छैन। यही कारणले हड्डीहरू मैदानमा फिंजाएको गाईको गोबर जस्तै हुनेछ।
3 “म यहूदाका मानिसहरूलाई आफ्नो घरपरिवार छाड्न बाध्य गराउनेछु। ती मानिसहरूलाई विदेशमा लगिनेछ। यहूदाका केही मानिसहरू जो लडाँईमा मरेनन् तिनीहरूले लडाइँमा मरेको भए हुन्थ्यो भन्ने इच्छा गर्नेछन्।” यो परमप्रभुको सन्देश हो।
पाप र दण्ड
4 “यर्मिया, यो यहूदाका मानिसहरूलाई भन: ‘परमप्रभु यी कुराहरू भन्नुहुन्छ:
“‘तिमी जान्दछौ कि जब एकजना मानिस तल झर्छ,
फेरि माथि उठ्छ,
यदि एकजना मानिस विग्रन्छ भने,
5 यहूदाका मानिसहरूले भूल बाटो समाते।
तर किन यी मानिसहरू निरन्तर गल्ती बाटोमा गईरहेछन्?
तिनीहरू आफ्नै झूटा कुराहरू विश्वास गर्छन्।
तिनीहरू फर्की आउन अस्वीकार गर्छन।
6 मैले तिनीहरूलाई खुब होशियारीसित हेरेको छु अनि सुनेको छु।
तिनीहरू सही कुरा बोल्दैनन्।
तिनीहरू आफूले गरेको पापमा दु:खी छैनन्,
अनि भन्दैनन्, मैले के गरें?
युद्ध भूमिमा दौडिरहेको घोडाहरू जस्तै तिनीहरू
आफ्नै बाटोमा हिँडिरहेका छन्।
7 आकाशमा उड्ने चरा-चुरूङ्गीहरूले पनि
आफ्नो ठीक समय जान्दछन्,
अनि साँरस, ढुकुर, गौंथली कर्याङ्ग-कुरूङ्गहरूले,
आफ्नो नयाँ घरमा जाने समय जान्दछन्,
तर मेरा मानिसहरू जान्दैनन्,
परमेश्वरले उनीहरूबाट के चाहनु हुन्छ।
8 “‘तिमीहरू भन्छौ, “हामीसँग परमेश्वरको शिक्षाहरूछन् यसर्थ हामी ज्ञानी छौं!”
तर यो सत्य होइन, किनभने शास्त्रीहरूले आफ्ना कलमलाई झूटो बनाएका छन्।
9 “ज्ञानी मानिसहरूले” परमप्रभुको वचनहरू सुन्न अस्वीकार गरे।
यसकारण तिनीहरू वास्तवमा “ज्ञानी मानिसहरू” होइनन्।
ती “ज्ञानी मानिसहरूलाई” जालमा फँसाइएका छन्,
अपमान गराइएका छन् र लज्जित पारिएका छन्।
10 यसकारण, म तिनीहरूका पत्नीहरू अरूहरूलाई दिनेछु।
म तिनीहरूका खेतहरू नयाँ मालिकहरूलाई दिनेछु।
सम्पूर्ण इस्राएलका मानिसहरूले घुस लिन्छन्।
सबै मानिसहरू-तल्लो दर्जादेखि माथिल्लो दर्जा सम्माका एउटै व्यवहारका छन्।
तिनीहरू अगमवक्ताहरूदेखि पूजाहारीहरूसम्म सबै कपट व्यवहार गर्छन्।
11 मेरो मानिसहरूका गहिरो घाउहरूलाई
तिनीहरूले केही जस्तो मानेनन्।
तिनीहरू भन्छन्, “यो ठीकै छ, प्रत्येक कुरो नै ठीकै छ।”
तर वास्तवमा केही पनि ठीक छैन।
12 तिनीहरू आफ्ना नराम्रा कामहरूदेखि लज्जित हुनै पर्छ।
तर तिनीहरू पटक्कै लज्जित छैनन्।
कसरी लज्जित हुनु तिनीहरू जान्दैनन्।
यसर्थ जब म तिनीहरूलाई सजाय दिनेछु
तिनीहरू अरू मानिसहरूसितै तल झर्छन।’”
परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ।
13 “परमप्रभुले भन्नुभयो, ‘म तिनीहरूका अन्नबलि लैजानेछु।
तिनीहरूका झ्याङमा एउटै पनि अङ्गुर रहनेछैन,
नेभाराको बोटमा एउटै पनि फल रहने छैन।
पातहरू पनि ओइलिनेछन र सूख्खा हुनेछन्।
मैले दिएका प्रत्येक वस्तु लैजानेछु।’”
14 “किन हामी यहाँ बसिरहेका छौं? ‘आऊ, हामी बलिया शहरहरूमा जाऊँ।
त्यहाँ हामी मृत्यु वरण गरूँ कारण परमेश्वर,
हाम्रा परमप्रभुले हामीलाई सड्नु भनी आदेश दिनु भएकोछ।
हामीले परमप्रभुको विरूद्ध पाप गरेकाछौं,
यसकारण परमेश्वरले हामीलाई
विष मिसाएको पानी पिउँनु दिनुभएको छ।
15 हामीले ब्यार्थमा शान्ति पाउने आशा गर्यौं।
हामीले निको हुने आशा गर्यौं तर डर मात्र हात लाग्यो।
16 दानबाट शत्रुहरूका घोडाहरूको स्वाँ-स्वाँ आवाज
घोडाहरूको हिनहिनाइले सम्पूर्ण जमीन काम्छ।
यो जमीन र यसमा भएका प्रत्येक वस्तु
नष्ट पार्न शत्रुहरू आएका छन्।
तिनीहरू यो शहर यसमा बसो-बास गर्ने सबै मानिसहरू
नष्ट पार्न आएका छन्।’”
17 “हेर, म तिमीलाई आक्रमण गराउन विषालु सर्पहरू पठाउँदैछु।
ती सर्पहरूलाई नियन्त्रणमा राख्नु सकिंदैन।
तिनीहरूले तिमीलाई डस्नेछन्।”
यो सन्देश परमप्रभुको हो।
19 मेरा मानिसहरूको चित्कार सुन।
राष्ट्रको बिभिन्न ठाउँहरू बाट, मानिसहरू सहायताको निम्ति चिच्याई रहेका छन्।
तिनीहरू भन्छन्, “के परमप्रभु अझै सियोनमा हुनुहुन्छ?
के सियोनका राजा अझ त्यहाँ हुनुहुन्छ?”
तर परमेश्वर भन्नुहुन्छ, “यहूदाका मानिसहरूले,
बेकारका विदेशी देवताहरूलाई पूजे।
तिनीहरूले मलाई क्रोधित पारे।
तिनीहरूले किन त्यसो गरे?”
20 अनि ती मानिसहरू भन्छन्,
“फसल कटनीको समय बितिहाल्यो।
ग्रीष्मकाल समाप्त भयो।
अनि अझ हामी सुरक्षित भएका छैनौं।”
21 मेरा मानिसहरूले मलाई चक्कानाचूर पारेकाले म चक्कानाचूर भएको छु।
म शोकाकुल छु अनि त्रासले मलाई घेर्छ।
22 नि:सन्देह गिलादमा केही औषधी छ।
नि:सन्देह गिलादमा वैद्य छ,
यसकारण किन मेरा मानिसहरूको चोट निको हुँदैन्?